वास्तुशास्त्र र भाग्यमा विश्वास गर्नेहरुले पैसा जोगाउँन यी कुराहरु याद गर्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
वास्तुशास्त्र र भाग्यमा विश्वास गर्नेहरुले पैसा जोगाउँन यी कुराहरु याद गर्नुहोस्
तपाई भाग्य, सौभाग्य वा दुर्भाग्यलाई मान्नु हुन्छ कि हुन्न ? कतिलाई यो अन्धविश्वास लाग्छ भने कतिलाई आश्था । भाग्यलाई अन्धविश्वास मान्नेहरु परिश्रमको भर पर्छन् भने भाग्यलाई परिश्रमको सहायक मान्नेहरु भाग्यलाई पनि विश्वास गर्छन् । यदि तपाई भाग्यलाई विश्वास गर्नु हुन्छ भने यो लेख तपाईका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।
लक्ष्मी माताको फोटो : वास्तुशास्त्र अनुसार पर्समा धनकी देवी लक्ष्मीको फोटो राख्दा पर्स कहिलै खाली हुदैन्।
चामलको पोका : बास्तुशास्त्र अनुसार चामल शुक्र ग्रहसँग रिलेटेड अन्न हो। त्यसैले भगवान् लक्ष्मीलाई चढाएको सानो एक पोका चामल सधै आफ्नो पर्समा राख्नुहोस् तपाईको धन सञ्चित हुनेछ।
श्रीयन्त्र : बास्तशास्त्रमा श्रीयन्त्रलाई लक्ष्मीको स्वरुप मानिन्छ। त्यसैले सधै आफ्नो पर्समा सानो आकारको श्रीयन्त्र राख्ने गर्नुहोस्।
गुरुको फोटो : पर्समा सधै आफ्नो गुरुको फोटो राख्न सक्नुहुनेछ। यसले जीवनमा सकारात्कम प्रभाव पर्दछ र काममा सफलता मिल्दछ।
लक्ष्मीसँग सम्बन्धीत दोस्रो बस्तु : तपाईले आफ्नो पर्समा भगवान् लक्ष्मी मातासँग सम्बन्धीत दोस्रो बस्तु राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसले तपाईको धन हानी हुनबाट बचाउछ।
Don't Miss it केराको फुल कुन बेला कसरी खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ ? जानी राखौँ
Up Next डिम्पल नहुनेहरुले यसरी पनि बनाउँन सक्ने रहेछन् गालामा डिम्पल
जापानी महिलाहरुले चामलको प्रयोग गरेर आफ्नो छाला गोरो बनाउछन्
१. भिजाइएको चामल पिसेर यसमा थोरै बेकिङ सोडा मिलाएर अनुहारमा लगाउनुहोस । यसले तपाईको अनुहार गोरो हुन्छ । २. चामल…
यदि सर्पले टोकिहालेमा यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
१. चिसो माटोको पट्टी बनाउनुहोस् र त्यसलाई टोकेको स्थानमा राख्नुहोस् । यसलाई हरेक १० मिनेटमा परिवर्तन गर्नुहोस् । २. घाइतेलाई…
एक दिनमा एक किलो तौल कम गर्न चाहनु हुन्छ भने फलो गर्नुस यो डाइट प्लान
भारतका आयुर्वेदिक एक्सपर्ट र १० वटाभन्दा बढी स्वास्थ्यसम्बन्धि किताब लेखिसकेका डा. अबरार मुल्तानीले यस्तो डाइट प्लानबारे जानकारी दिएका छन् जसले…
चट्याङ भनेको आकाशबाट खराब मौसमको बेलामा जमीनमा खस्ने एक प्रकारको बिद्युतिय करेन्ट हो । हुरीबतासको मौसम वा वर्षायाममा वायुमण्डलमा विपरीत…
तालीले फाइदा गराउने केही सूची हेर्नुहोस् १. रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि तालीले मानिसमा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्छ र कुनै पनि रोगसँग…
यस्ता छन् अनेकौ फाइदाहरु चिसो पानीले नुहाउँदा, जानी राखौ
१. चिसो पानीले नुहाउँदा शरीरमा आनन्द आउनुका साथै यसले शरीरमा रक्तसञ्चार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँछ । २. यसले शरीरमा रोगसंग लड्न…
यसरि राखौ पेट सफा
हामीले खाएका कतिपय अस्वस्थकर खानाबारे आफैँलाई पत्तो नहुन सक्छ । जसले गर्दा हामी बिरामी पर्न जान्छौँ । अस्वस्थकर खानाले मुख्यतः…